Iindaba - Inkcazo yomsebenzi weqhosha lokulawula umdlalo
Inkcazo yomsebenzi weqhosha lomdlalo weqhosha
1. Ibhetri ifakwe kwi-groove ephakathi ngokwezibonda ezilungileyo kunye nezibi. Emva kokudibanisa, iqhosha lokubamba liya kukhanya;
2. Qhagamshela i-usb engenazingcingo yesiphatho kwibhokisi kwaye uyiqalise.
Unakho ukukhuphela eminye imidlalo efana nelobhu yomdlalo, njengendawo yokwamkela umdlalo, ukuba isiphatho silungelelaniswe nomdlalo, ungasebenzisa isiphatho ukusebenza. Unokukhangela imidlalo kwi-Intanethi kwaye uzame ukuyifaka ngokwakho. Iqondo lokuziqhelanisa kunye namaqhosha omdlalo ngamnye ahlukile, kwaye amaqhosha okusebenza awafani.
Isitshixo se-AUTO: Xa udlala imidlalo yokulwa, idlala indima ethi QHUBEKA, oko kukuthi, inokuqhubeka nokudlala;
Iqhosha le-TURBO: Liqhosha lokugqabhuka, ubambe phantsi iqhosha le-TURBO kwaye emva koko ucinezele nayiphi na enye ku-1, 2, 3, 4, ngoko eli qhosha lichazwa njengokugqabhuka;
CALA isitshixo: sisitshixo sokurhoxisa ugqabhuko, oko kukuthi, cinezela CALA kwaye emva koko iqhosha lichazwe njengeqhosha lokugqabhuka ukurhoxisa ugqabhuko; Iqhosha le-AUTO: linokusetyenziswa njengeqhosha elizenzekelayo lokugqabhuka; KHETHA kwaye QALA izitshixo: ilingana ngokubanzi ne-9,10 izitshixo;
I-ANALOG kunye ne-MODE amaqhosha: Kukho iindlela ezimbini ngokubanzi kwivili lethu lokuqhuba umdlalo okanye i-gamepad: imo yedijithali (DIGITAL) kunye nemo ye-analog (ANALOG). Cinezela iqhosha leMowudi ukuze utshintshe imo yokusebenza: ukukhanya okubomvu kwisibambo kuvuliwe ukubonisa imo ye-analog, efanelekileyo kwimidlalo efuna ukuchaneka okuphezulu njengokugijima kunye nokudubula; ukukhanya okubomvu kucinyiwe kubonisa imo yedijithali, efanelekileyo kwimidlalo efuna ukuchaneka okuphantsi njengokulwa;
Amaqhosha e-11 kunye ne-12 kwi-gamepad: ngokuthe nkqo cofa i-joystics ekhohlo nasekunene ukuya kwi-11 kunye ne-12 yamaqhosha, iqhosha le-11 ekhohlo kunye ne-12 iqhosha ekunene.